Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Mgbasa Ozi Wizz Air nwere ike ịmị mkpụrụ
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Hungary na -agbasa akụkọ • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa
Ebe imirikiti mba Europe na-enye ohere maka ndị njem ọgwụ mgbochi nke ọma, kọntinent ahụ atọrọla maka ịrị elu nke ukwuu ka ntụkwasị obi njem njem na-ewuli elu, nke dị mma maka ụgbọ elu centric nke Europe.
Wizz Air na-ezube ịrụ ọrụ n'ike ọrịa tupu August niile.
A ga-achọrịrị ụgbọ elu dị ọnụ ala.
Wizz Air nwere ike ịbụ ike Europe n'oge ọkọchị a.
Nzọ Wizz Air na nlọghachi okporo ụzọ Europe nwere ike ịkwụ ụgwọ maka onye na -ebu ya. A ga-achọrịrị ụgbọ elu dị ọnụ ala, na onye na-ebu oke ọnụ nwere ike bụrụ ike Europe n'oge ọkọchị a.
Wizz AirA ga-achọ ọnụ ala ụgbọ ala ya ka ọ na-ezube ịrụ ọrụ tupu ọrịa ebubata ọrịa n'ime August niile. Ntuli aka emere n'oge na-adịbeghị anya gosipụtara ọnọdụ siri ike nke ndị na-ebu ụgbọ ala iji weghara ọchịchọ pent, dịka 52% nke ndị na-aza ajụjụ zuru ụwa ọnụ kwuru ọnụahịa/uru dị ka ihe kachasị mkpa mgbe ị na-ahọrọ akara ụgbọ elu.
Wizz AirỌnụ ego dị ala yana netwọkụ sara mbara ga -eme ka ọ bụrụ otu n'ime ndị na -arụ ọrụ kachasị mma n'oge ọkọchị a. Ebe imirikiti mba Europe na-enye ohere maka ndị njem ọgwụ mgbochi nke ọma, kọntinent ahụ atọrọla maka ịrị elu nke ukwuu ka ntụkwasị obi njem njem na-ewuli elu, nke dị mma maka ụgbọ elu centric nke Europe.
Nnyocha ndị ahịa ọhụrụ (Q2 2021) egosila naanị ọdịda 2% na nchegbu ego ndị ahịa, ebe 85% nke ndị na -aza ajụjụ ụwa ka 'nwere oke', 'ntakịrị', ma ọ bụ 'nwere oke' gbasara ọnọdụ ego nke onwe ha, ma e jiri ya tụnyere 87% na nyocha Q1 2021.
Gafee H1 2021, ọtụtụ ọnọdụ ego ndị njem anaghị agbanwe agbanwe. Ndị njem ga -enwe ike ịchọ nhọrọ njem dị ọnụ ala n'oge adịghị anya iji chekwaa ego ka mmefu ego na -esiwanye ike. Nlaghachi siri ike Wizz Air ga -amị mkpụrụ. Site na ịlaghachi n'ike zuru oke, ndị njem ga-emebi maka nhọrọ, na Wizz Air ga-abụ onye ama ama maka netwọkụ sara mbara n'oge ọkọchị a. Ọtụtụ ndị asọmpi, gụnyere Alitalia na Norwegian Air Shuttle, belatara ụgbọ elu, wee pụọ n'ahịa, na -ahapụ oghere ndị na -enye Wizz Air ohere kacha mma iji wulite akara ma bụrụ onye mmeri ọrịa.